Iincwadi zeeComic 101 Inkcazo kunye neMbali
Imbali emfutshane yeencwadi zeeComic kunye noBuchule bamaFomic Formats
Incwadi yamahlaya njengokuba siyazi namhlanje ngumagazini we-softcover wezobugcisa obunemifanekiso (inombolo yezithombe ngokulandelelana) kunye namazwi athile asetyenziswa ndawonye bathetha ibali. Isikhuselo sivame ukuba iphepha elilumkileyo eliphakathi kwephepha eliphezulu eliphezulu kunye nokuhambelana kwephephandaba. Umlenze uvame ukuqhutyelwa kunye neziqu.
Iincwadi zeComic namhlanje zihlanganisa iintlobo ezahlukeneyo zezifundo. Kukho ukwesaba, imfesane, i-sci-fi, ulwaphulo-mthetho, ubomi boqobo, kunye nezinye izifundo ezininzi ezikhupha iincwadi ze-comic.
Iincwadi ezininzi zee-comic ziyaziwa ngokuba yizinto eziphezulu.
Imvelaphi yegama elithi Comic livela kumacwecwe amacwecwe avame ukugijima kumaphephandaba. Abanye bathi, i-comic kwifomu layo elungileyo liye labonwa kwiinkcubeko zokuqala, ezifana nobugcisa bokudonga baseYiputa kunye nomntu wokuqala. Igama, "ii-Comics," isabandakanywa neencwadi zombini, ii-comic strips, kunye nabadibanisi.
Iincwadi zeComic zaqala ukuqala eMelika ngo-1896 xa abavakalisi beqala ukuvelisa amaqela aqokelelwe amaqhekeza avela kumaphephandaba. Iikholeji zenze kakuhle kwaye zabangela ukuba abavakalisi bafike ngamabali amasha kunye nabalinganiswa kule fomethi. Umxholo osetshenziswe kwakhona kumaphephandaba ekugqibeleni wanikela kwimixholo emitsha neyayimvelaphi eyaba yincwadi yaseMerika yamahlaya.
Yonke into ishintshile nge-Action Comics # 1. Le ncwadi yamacwecwe yasifaka kwisiqulatho esiphezulu kwi-1938.
Umlingiswa kunye nezobuhlaziyizi mpu melelo kakhulu kwaye yavula indlela yabamemezeli bencwadi yamahlaya kunye namaqhawe amasha njengathi namhlanje.
Eli gama, "uhlazo," lisetyenzisiwe kwizinto ezininzi ezahlukileyo kwaye liyaqhubeka nokuguqukela kulolu suku. Nazi ezinye zeefomathi ezahlukeneyo:
Incwadi yeComic - Njengoko kuchazwe ngasentla, oku kukuthi ixesha elikhoyo libhekisela kwiindawo ezininzi.
I-Comic Strip - Yiloo nto oyifumana kwiphephandaba elifana neGarfield, okanye i-Dilbert kunye nento eyayibizwa ngayo okokuqala ngekota, "umculi."
Iveli eNobumba - Le ncwadi ebanzi, kunye neglue ibonwa yimpumelelo enkulu namhlanje. Le fom isetyenziswe ngabamemezeli ukunceda ukwahlula umxholo kumacwecwe kunye nezifundo ezivuthiweyo kunye nomxholo womxholo. Kungekudala, ivelidi yomfanekiso ibone impumelelo enkulu ngokuqokelela uchungechunge lwee-comic, ukuvumela abathengi ukuba bafunde ibali elihlaziyileyo elihleliyo. Nangona kungenjalo njengothando oluqhelekileyo njengencwadi ehleliweyo yama-comic, iNew Novel ibiye ikhupha iincwadi zee-comic ngokwemveliso yokukhula kwonyaka.
I-Webcomics - Eli gama lisetyenziselwa ukuchaza amacwecwe ama-comic kunye neencwadi ezinobomi ezifumaneka kwi-intanethi. Amaninzi amanyathelo amancinci ngabantu abafuna nje ukufumana indawo yokudala, kodwa abanye baye bajika ii-webcomics zabo zibe yimpumelelo efana neMdlali Vs. Umdlali, uPenny Arcade, i-Order Of The Stick, kunye neCtrl, Alt, Del.
Incwadi yehlabathi yamahlaya inokwakhe kunye nesigxina nje njengazo naziphi ezinye izinto zokuzonwabisa. Nazi ezinye kufuneka ziyazi imigaqo yokufikelela kwiincwadi zee-comic. Iinqununu ziya kukuthatha kwiinkcukacha ezingaphezulu.
Ibanga - Imeko yokuba ibhokisi yamahlaya.
Ivelidi yezobuGcisa - Incwadi ebomvu ekhohlakeleyo ekhohlakeleyo ehlala iqokelelwa kwezinye iincwadi ze-comic okanye ibanga elilodwa ibali.
I-Mylar Bag - Iplastiki yokukhusela eyenzelwe ukukhusela incwadi yamahlaya.
Ibhodi yeComic Book - Icandelo elincinci lekhadibhodi elitshiywe ngasemva kwencwadi yamahlaya kwisikhwama se-mylar ukugcina incwadi yamahlaya.
Ibhokisi leComic - Ibhokisi lekhadibhodi eklanyelwe ukubamba iincwadi zoonobumba.
Ukubhaliselwa - Abapapashi kunye neendawo zokugcina iincwadi zee-comic zihlala zibonelela ngokubhaliselwa kwenyanga nganye kwiincwadi ezinobomi. Njenge-subscription magazine.
Isikhokelo sexabiso - Isisetyenzisi esetyenziselwa ukuchonga ukubaluleka kwencwadi yamahlaya.
I-Indy - Igama elisetyenziselwa, "ezizimeleyo," ngokubhekiselele ekubhekiselele kwiincwadi zamahlaya ezingapapashwa yinkcazo ekhoyo.
Ukuqokelela iincwadi zee-comic kuyindawo ehambelana nokuthenga iincwadi zee-comic. Xa uqala ukuthenga amahlaya kunye nokuhlawula inani elithile, unayo iqoqo. Ubunzulu obuya kuyo ukuqokelela nokukhusela loo qoqo lunokuhluke ngokupheleleyo. Ukuqokelela iincwadi zee-comic kungaba yinto yokuzonwabisa ngokuzonwabisa kwaye ngokubanzi iquka ukuthenga, ukuthengisa nokukhusela iqoqo lakho.
Zininzi iindlela zokufumana iincwadi ezinobomi.
Incwadi elula kunazo zonke yokufumana iya kuba yintsha. Umthombo omkhulu weengqungquthela ukufumana isitoreji sencwadi yendawo yamahlaya kunye nokufumana into oyithandayo. Unokufumana kwakhona amahlaya omtsha ngokubanzi, "ukuthenga enye," ivenkile, izitolo zokudlala, iibhrari kunye nezinye iimarike zembombo.
Ukuba ufuna amaqhezu amadala, unakho ukhetho oluninzi. Uninzi lweencwadi zee-comic zithengisa uhlobo oluthile lwemiba elandelayo. Unokufumana kwakhona amaqhezu amadala kwiivenkile ezifana ne-Ebay, kunye ne-Heritage Comics. Kwakhona ujonge kwiimpapasho zepapasho okanye kwiindawo zokuthumela i-intanethi njenge-www.craigslist.com.
Ukuthengisa iqoqo lakho lomntu siqu kunokuba lukhetho olunzima. Ukuba ufika kule nqanaba, ukwazi ukuba nini kunye nalapho ungathengisa khona iidiski zakho zingundoqo. Into yokuqala omele uyiyazi ibakala (imeko) yamahlaya akho. Xa usenjenjalo, unokuba usendleleni.
Emva koko, kufuneka wenze isigqibo malunga nokuba uthengise iqoqo lakho. Ukhetho olucacileyo luya kuba yintengiso yezitolo, kodwa abayi kukwazi ukukunika oko bakulungeleyo, njengoko befuna ukwenza inzuzo ngokunjalo.
Unokuzama ukuzithengisa kwiisayithi zintengiso, kodwa uqwalaselwe, kufuneka uqiniseke ukuba ufumene kakhulu malunga nale meko uyazi indlela yokukhusela iincwadi zakho zee-comic ngexesha lokuthunyelwa.
Inqaku elincamisayo malunga nokuthengisa amaqhekeza akho: Ukuthengisa iqoqo yemifanekiso yamahlaya .
Ngokuqhelekileyo kukho iinkampu ezimbini ezibalulekileyo xa kuziwa ekukhuseleni amahlaya akho.
Umqokeleli wokuzonwabisa kunye nomqokeleli wezolimo abo babini. Umqokeleli wokuzonwabisa uyazithengela amaqhekeza nje ngamabali kwaye akanandaba nokuba kwenzekani kwiidyuli zabo emva koko. Umqokeleli otyalo-mali uthenga iincwadi ezinobuntwini nje ngexabiso lazo mali.
Uninzi lwethu luwela kwindawo ethile phakathi, ukuthenga amahlaya okuzonwabisa kunye nokufuna ukukhusela ixabiso labo elizayo. Ukhuseleko oluyisiseko lubafaka kwiiplastiki zamatlaski zamabhodi ngamabhodi amaphephabhodi amancinci ukuze azigcine ekuguquleni. Emva koko, ziyakwazi ukugcinwa kwibhokisi yebhodibhodi eyenzelwe kuphela iincwadi zamahlaya. Zonke ezi zinto zingathengwa kwisitoreji sakho sencwadi.
Iimvumi eziphezulu / ezidumileyo
Kukho ezininzi zamanqaku ezincwadi ze-comic ukusuka kwiincwadi zee-comic eza kuqala ukunyatheliswa. Abanye baye baqhubeka nokuvavanywa kwexesha kwaye baqhubeka beyaziwayo namhlanje. Uluhlu luqela leencwadi ezidumiweyo zee-comic kunye nabalinganiswa ngokwemihlobo.
I-JLA (Justice League of America)
Y Umntu Wokugqibela
Kukho abaninzi abavakalisi abahlukeneyo beencwadi zama-comic ngaphaya kweminyaka, kodwa abavakalisi ababini baye baphakanyiswa phezulu kwi-book book comic, bathatha phantse i-80-90% yemarike. Aba babini ababashicileli beMarvel neDic Comics kwaye badla ngokubizwa ngokuthi, "AbaBhulu ababini." Baye banamanye amanqaku aziwa kakhulu kwiindawo zokuhlaziya. Kungekudala, abanye abavakalisi baye baqala ukwenza ubungqina obuqinileyo kwaye nangona besenza nje inxalenye encinci yeemarike, baqhubeka bekhula kwaye baba yingxenye enkulu yeencwadi zee-comic kwaye baye bancedisa ukutshintshe imida ye-comic book content nomxholo womdali.
Kukho iintlobo ezine zabashicileli.
1. Abapapashi abakhulu
Inkcazo yabapapashi abaphambili - Aba bavakalisi baye bahlala ixesha elide kwaye baye bahlakulela abalandelayo abaninzi abalandeli ngenxa yemali yabalinganiswa abathandwayo.
Ukumangaliswa - X-Men, Spider-Man, Hulk, Four Four Fantastic, Captain America, The Avengers
DC - Superman, Batman, Woman Wonder, Green Lantern, I-Flash, i-JLA, i-Teen Titans
2. Abapapashi abancinci
Inkcazo yabapapashi abancinci - Aba bashicileli bancinci kwimvelo kodwa bakhangela abaninzi abadali ngenxa yokuba banokulawula okungaphezulu kubalinganiswa abayidalayo. Abayi kunika amanqaku amaninzi njengabashicileli abakhulu, kodwa oko akuthethi ukuba umgangatho uya kuba ngaphantsi.
Umfanekiso - Godland, The Waking Dead, Invincible,
Ihhashi Elimnyama - Isixeko Sesixeko, i-Hellboy, i-Star Wars, i-Buffy i-Vampire Slayer, i-Angel, iConan
IDW - Iintsuku ezingama-30 zobusuku, iAllen Angel, i-Criminal Macabre
Archie Comics - Archie, Jughead, uBetty noVerica
Disney Amaqhinga - Mickey Mouse, Scrooge, Pluto
3. Abapapashi abazimeleyo
Inkcazo yabaPashicileli abazimeleyo - Aba bavakalisi badla ngokusemgangathweni yenkcubeko ethandwa. Phantse bonke abenzi bomdali (umdali ugcina amalungelo kubalinganiswa kunye neembali abazenzayo), kwaye ezinye zezihloko zingaqukatha umxholo okhulileyo.
I-Kitchen Sink Press
4. Abazimeli Abazimeleyo
Inkcazo yeZiqu-Abapapashi- Aba bavakalisi ngokubanzi baqhutywa ngabantu abenza iincwadi zee-comic. Benza ininzi xa kungenjalo yonke imisebenzi yokwenza ii-comics, ngokubhala, kunye nobugcisa ukupapasha nokushicilela. Umgangatho unokwahluka ngokusuka kumshicileli ukuya kumvakalisi kwaye isiseko somqhubi siqhelekileyo kwingingqi. Ngenxa ye-intanethi, nangona kunjalo, abaninzi balaba baphumeleli baye bakwazi ukuthengisa iintengiso zabo kwabanye abaninzi. Abanye baye bafumanisa impumelelo ngokushicilela ngokwabo njenge-American Splendor (ngoku ene DC), Shi, kunye neCerebrus.
I-Press Fighter Press
I-Crusade Fine Arts
UClement Clarke Moore